Atụmatụ na usoro maka Olee naghachi iCloud Paswọdu
> Resource> iCloud> Olee naghachi iCloud Paswọdu
iCloud-enye gị ohere iji nweta gị music, photos, videos, kọntaktị, na akwụkwọ site iPhone, iPad, iPod, n'ebe ọ bụla na ị bụ. Ọ na-eme faịlụ òkè, mmekọrịta na nkwado ndabere nke ukwuu mfe. Ọ naanị kwesịrị ka i mee otu ihe: echeta gị iCloud akaụntụ. Na ị na-achọrọ gị banye iCloud mgbe ị akwado faịlụ ka iCloud, weghachi data si iCloud ndabere ma ọ bụ na-agbalị iji "Chọta My iPhone". Otú ọ dị, o doro anya na, ị na-echefu gị iCloud paswọọdụ ebe unu na-ebe a.
Nọgidenụ na-Uwe elu on! N'okpuru bụ ụfọdụ ụzọ maka otú naghachi iCloud email paswọọdụ. I nwere ike ịgbalị nri onye dị ka ọnọdụ gị.
Mkpa: Ohaneze-ekwu okwu, gị Apple ID bụ ID n'ihi na gị iCloud akaụntụ. Na nke a, na-agbake iCloud paswọọdụ pụtara na-agbake paswọọdụ maka Apple ID.
* Ọ bụ nanị na-echeta gị Apple ID, ma ọ bụghị paswọọdụ:
Nzọụkwụ 1. Open Apple ukara saịtị maka naghachi iCloud paswọọdụ na ihe nchọgharị weebụ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Tinye Apple ID (akaụntụ email gị na-eji edebanye Apple ID) na pịa Ọzọ.
Nzọụkwụ 3. Họrọ Email Nyocha (mkpa ka ị ego gị email) ma ọ bụ zaa nche ajụjụ (tinye nri azịza dị ka ị nyere mgbe ị na mbụ ike gị Apple ID)
Nzọụkwụ 4. Ma ị na-na na natara email na Igbe mbata ma ọ bụ zara nche ajụjụ n'ụzọ ziri ezi, Apple ga-enye gị a njikọ iji tọgharịa paswọọdụ gị. Dị nnọọ pịa njikọ imeghe nrụpụta paswọọdụ window na-abanye na ọhụrụ a paswọọdụ.
* Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara icheta gị Apple ID, M pụtara adreesị ozi-e na paswọọdụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eme dị ka ndị a na-agbake furu efu iCloud paswọọdụ:
Nzọụkwụ 1. Open Apple ukara saịtị maka iCloud paswọọdụ mgbake na kọmputa gị na a nchọgharị na weebụ.
Nzọụkwụ 2. Pịa "Chefuru gị Apple ID?".
Nzọụkwụ 3. Na mmapụta window, Tinye aha gị na ugbu a email adreesị. Ọ ka mma tinye Tupu Email Address kwa (i nwere ike Tinye adreesị email na ị na-eji edebanye Apple ID site kechioma ukem ini). Pịa Ọzọ.
Nzọụkwụ 4. Họrọ Nyocha usoro: Email Nyocha ma ọ bụ zaa nche ajụjụ.
Nzọụkwụ 5. Ọ bụrụ na ị họọrọ email Nyocha, ego gị email iji tọgharịa ọhụrụ paswọọdụ. Ọ bụrụ na ị họọrọ ịza nche ajụjụ ahụ, wee tinye azịza kpọmkwem dị ka ihe ị na-ịtọ mgbe ị na mbụ kere akaụntụ gị.
Atụmatụ: Your iCloud paswọọdụ na-echebe gị niile onwe ozi ụlọ ahịa dị na iCloud na-enye gị ikike iji chọta ngwaọrụ gị na ihichapu data na ngwaọrụ remotely site na iji Chọta My iPhone mgbe ị kwụsịrị ngwaọrụ. Na nke a, ị kwesịrị ị na-echeta paswọọdụ gị. Na n'ihi nke nche, ịgbanwe gị iCloud paswọọdụ mgbe nile ma ọ bụrụ na ị na-emekarị na-eji gị iCloud akaụntụ ke eferife. Ọ bụrụ na gị na ngwaọrụ a nọ bịanyere aka na iCloud akaụntụ, unu ga-esunye a passcode iji chebe gị ngwaọrụ a meghere site ndị ọzọ: pịa Ntọala> Ozuruọnụ> pịgharịa gaa na ala na enweta Touch ID & passcode> tinye paswọọdụ.